Antontan-taratasy Miisa 500,000 Izay Tsy Tian’ny Governemanta Saodiana Ho Hitan’ny Olom-pirenena Naporitsak’i Wikileaks · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2015 14:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Deutsch, Español, русский, عربي, English
Maherin'ny antsasaka tapitrisa ireo antontan-taratasy Saodiana nanomboka navoakan'i Wikileaks, tao anatin'izany ny sasantsasany amin'ireo torohay faran'izay saropady, izay nandraràn'ny governemanta Saodiana ireo terataniny mba tsy hifanakalozana na hidirany.
Nanomboka namoaka antsokosoko ireo antontan-taratasy maherin'ny antsasaka tapitrisa an'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahinin'i Arabia Saodita ny Wikileaks. Mitontaly 61.000 ireo antontan-taratasy, amin'ny teny Arabo, efa niparitaka amin'ny aterineto, nitarika loharanom-baovao tsy lany laniana momba ny fifanakalozana miafina tany ambadiky ireo sehatra tany an-dalantsaran'ny fitondrana Saodiana.
Na izany aza anefa efa nampitandremina ny Saodiana mba tsy hikaroka na aiza na aiza ireo tahirin-kevitra tafaporitsaka ireo, na hizara na hino izay votoatiny.
Ilay vaovao nihahaka, nomena anarana hoe Ireo Telegrama Saodiana, dia mampibaribary ireo serasera miafina avy amin'ireo Masoivoho Saodiana, ary hatramin'ireo tatitra “Faran'izay Saropady” avy amin'ireo andrim-panjakana Saodiana hafa, anisan'izany ny Minisiteran'ny Atitany sy ny Sampam-pitsikilovana Ankapoben'ny Fanjakàna, araka ny fanambarana an-gazety nataon'ilay tranonkala mpitsoka kiririoka.
“Ny alok'ilay angon-drakitra goavana ihany koa dia ahitana ireo serasera-na mailaka maro nisy teo amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ireo rantsana ivelany. Havoaka tsi-alinalina isaky ny antontan-taratasy ireo Telegrama Saodiana ato anatin'ny herinandro ho avy. Androany, antontan-taratasy sarobidy manodidina ny 70.000 no avoakan'ny Wikileaks amin'ny andiany voalohany amin'ilay tahiry”.
Nilaza i Julian Assange, mpamoaka WikiLeaks fa:
“Miha manala sarona ny jadona hafakely tsy hay faritana sy feno misitery izay tsy hoe nankalaza fotsiny ny faha-100 taonan'ny fanapahan-doha fanaony tamin'ity taona ity ny Telegrama Saodiana, fa nanjary lasa loza ho an'ny manodidina azy sy ny tenany koa.”
Vakio koa: Buying Silence: How the Saudi Foreign Ministry controls Arab media (Mividy Fahanginana : Ahoana no hifehezan'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Saodiana ny media Arabo)
Tsy mahagaga raha tsy faly ny fanjakana Saodiana ka tonga hatramin'ny fanakànana ny olom-pireneny mba tsy hiraharaha ilay alokà angon-drakitra, nanofahofa azy io ho toy ny asa mampidi-dozan'ireo “fahavalom-pirenena”. Tao anatin'ny bitsika roa samihafa, mampitandrina ny olom-pireneny ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Saodiana mba tsy hiditra hijery izay nitete.
Vakiana toy izao ny bitsika voalohany:
Ry Teratany Tonga Saina malala,
Aza aparitaka ireo antontan-taratasy izay mety ho sandoka sady hanampy ireo fahavalom-pirenena hanatrarany ny tanjony
Minitra vitsy taty aoriana, manazava kokoa ny bitsika iray manaraka:
Aza miditra amin'ireo tranonkala noho ny fikatsahana hahazo ireo antontan-taratasy na vaovao nitete, izay mety noforonina, miaraka amin'ny tanjona hanohintohinana ny fiarovam-pirenena
Na dia tsy vitan'ireo bitsika, izay efa in'arivoivo isanaverina nalefa aza ny nanamarika ny hoe Telegrama Saodiana, nalaky takatr'ireo mpisera tao amin'ny Twitter ny tiana hahatongavana.
Maro ireo nizara dikasary mikasika ny fampitandreman'ny minisitra, miaraka amin'ireo fanehoankevitra, toy ity mpampiasa Twitter ity, izay manamarika fa:
Ao anaty adin-tsaina lalina ny governemantantsika ary manantena anareo, tahaka ny mahazatra, mba ho toy ny ampondra mpankato sy tsy hanely ny lamba malotony
Amin'ny fampiasana vazivazy, sy famaritana ireo Saodiana namany ho “olompirenena tonga saina”, manontany tena i Hala Aldoseri, Saodiana mpanoratra bilaogy, hoe inona no fahendrena ao ambadiky ny fandraràna ny Saodiana tsy hijery ireo vaovao tafaporitsika
Inona no fahendrena ao ambadiky ny fibahanana ny fahazoana miditra any? Mety ve izany ho an'ny ambiny rehetra eran'izao tontolo izao sy ny haram (voaràra ara-pinoana) eo amin'ny olom-pirenena tonga saina?
Eo amin'ny bitsika iray fanarahany azy, manazava izy fa:
Inona ankoatra izay efa fantatsika no aporitsakyny Wikileaks ho antsika? Momba ny anjara toeran'ny vola eo amin'ny fiantohana ny fankatoavana, na ny mikasika an'i Iràna sy ny Sionita, na ny fandaniana mahazatra an-dry zareo eo amin'ny fitondrana?